Dematting Deshedding chọrọ Manufacturers & Suppliers | China Dematting Deshedding orylọ ọrụ
Ndenye Ngwá Ọrụ Maka Nkịta
1.Deshedding Ngwá Ọrụ N'ihi na Nkịta na igwe anaghị agba nchara n'ọnụ esịmde site topcoat ka n'enweghị nsogbu na-adị mfe wepu rụrụ ntutu na undercoat.it nwekwara ike n'ụzọ dị irè mbo miri aji na-akpali anụ ọbara mgbasa.
Ihe eji achọ nkịta maka nkịta nwere agụba igwe anaghị agba nchara, ọ zuru oke na ahịrị anụ ahụ na anụ ụlọ gị ndị mara mma ga-anụ ụtọ usoro ejiji, dabara maka nwamba na nkịta na anụmanụ ndị ọzọ nwere obere ntutu ma ọ bụ ogologo.
3.Nke a na-achọ nkịta nwere obere bọtịnụ ntọhapụ, naanị otu pịa iji hichapụ ma wepụ 95% ntutu site na ezé, chekwaa oge gị iji kpochapụ mbo.
Dog Shedding Agụba ahịhịa
1.Our nkịta wụsịrị agụba ahịhịa nwere kemeghi na kpochidoro agụba na ị thatụ na ike ga-ekewapụ mepụta ka a 14 inch ogologo ịwụfu zaa-eme ka ọ ngwa ngwa na mfe iji.
2.This nkịta ịwụfu agụba ahịhịa nwere ike n'enweghị nsogbu & ngwa ngwa ewepu rụrụ Pet ntutu iji belata shedding. Can nwere ike idozi anụ ụlọ gị n'ụlọ.
3.There bụ a akpọchi na ahụ, ọ na-eme ka n'aka na agụba ga-akpali mgbe ejiji
4. nkịta na-awụfu agụba ahịhịa na-ebelata ịwụfu site na 90% na naanị otu oge 15 na-edozi ejiji n'izu.
Ngwongwo nkịta nkịta na nkịta
Dog Na Cat Deshedding Tool Brush bụ ngwa ngwa, mfe na a ngwa ngwa ụzọ wepụ na belata gị Pita si undercoat na nkeji.
Enwere ike iji ahịhịa nkịta ma nwamba a chọọ nkịta ma ọ bụ nwamba, nnukwu ma ọ bụ obere. Ngwongwo nkịta nkịta anyị na nkịta anyị na-ehichapụ site na 90% ma wepụ ntutu na ntutu isi na-enweghị nrụgide.
Nkịta a na nkịta a na-achọ ntutu na-ehichapụ ntutu isi, unyi na irighiri ihe si na uwe anụ ụlọ gị na-eme ka ọ na-egbu maramara ma dị mma!
Pet Undercoat Rake Dematting Ngwá Ọrụ
Ngwongwo anu ulo a na-achoputa bu ihe eji emeputa, belata dandruff, ịwụfu, ntutu isi na ihe egwu maka ahụ ike na-edozi ahụ.
Ngwongwo ihe eji eme anu ulo na-ewepu ntutu isi, akpụkpọ anụ nwụrụ anwụ, na dandruff site na anụ ụlọ nwere ike inye aka belata allergies na oge izu ike maka ndị nwe anụ ahụike.
Nke a Pita undercoat zaa dematting ngwá ọrụ na a na-abụghị ileghara, mfe na-ejide ahụ, anyị ejiji zaa bụ ndị na-abụghị abrasive na Pita akpụkpọ anụ na uwe na-agaghị nje gị nkwojiaka ma ọ bụ aka.
Dematting ahịhịa maka nkịta
1.Serrated pupụtara nke a dematting ahịhịa maka nkịta rụọ ọrụ nke ọma mee isi ike, tangles, na burs enweghị Anam Udeme. doo anu ulo gi si na ezigbo achoghi emebi, wepu iwepu ihe ruru 90%.
2.Ọ bụ ngwa ọrụ magburu onwe ya maka ịtọghe ebe siri ike nke ajị anụ, dị ka n'azụ ntị na akụkụ ahụ.
3.This dematting ahịhịa maka nkịta nwere mgbochi ileghara, mfe-adịgide njikwa ya ana achi achi mma na ala mgbe ị na-azụ gị Pita.